ZAZA VERY : Nanatsoaka ny fitoriana ny fianakaviana, navotsotra ilay rasazy nosamborina
Mbola nitana ny sain’ny maro ny resaka zaza very teny amin’ny hopitaly Androva iny na dia efa hita aza ilay zaza. 19 septembre 2018
Ny marainan’ny talata teo ary dia niara-nirohotra teny amin’ny tsenan’i Marolaka ireo mpivarotra sy ny vahoaka. Nanao tolo-tanana ho an’ity zazavavikely ity izy ireo tamin’izany ary samy nanolotra izay foiny. Natao izany mba ho fanampiana ny fianakaviana izay niharan’iny trangana hala-jaza iny sy ho fankaherezana azy ireo ihany koa.
Nandritra ity hetsika tolo-tanana ity no nanam baràna fa tapitra hatreo amin’izay ity raharaha zaza very ity, ka samy manohy ny fiainany andavanandro amin’izay ny rehetra. Tamin’ity tolo-tanana ity moa dia samy nanolotra izay voatsirambin’ny tanany avokoa na ireo mpivarotra na ireo vahoaka tonga teny Marolaka. Marihina fa olona maro no saika hirohotra teny amin’ny hopitaly ny andro nahitana ilay zaza mba hanampy sy hijery azy saingy tsy azo natao izany noho ny fepetra mifehy ny hopitaly.
Anisany vaovao lehibe nambara teo imasom-bahoaka nandritra ity hetsika ity ny filazàn’ireo fianakavian’ilay zaza very fa manatsoaka ny fitoriana ho an’ilay rasazy nosamborina izy ireo. Tamin’izay ihany no nilazana fa efa navotsotra ity rasazy izay noahiahiana ity, amin’izao fotoana izao. Tsy hadinon’izy ireo ny teny fisaorana ho an’ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka sy ny mpitondra fanjakana tamin’ny fanampiana azy ireo nandritra ny fotoana nikarohana ilay menaky ny ain’izy ireo.